Midowga Yurub oo shaaciyey tirada ciidamada uu u tabarayo Soomaaliya sanadka 2015 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Midowga Yurub oo shaaciyey tirada ciidamada uu u tabarayo Soomaaliya sanadka 2015
A warsame 29 November 2014
Mareeg.com: Midowga Yurub ayaa shaaciyey tirada askarta ay dowladda Soomaaliya u tababari doonaan sanadka soo socda ee 2015.
Howlgalka Tabaraka Midowga Yurub ee Soomaaliya (EUTM Somalia) ayaa sheegay iney sanadka 2015 u tababari doonaan dowladda Soomaaliya ciidamo gaaraya 1,200 askari.
EUTM Somalia ee fadhigeedu yahay Muqdisho ayaa sanadkii 2014 qabatay 11 tababar, iyadoo la leyliyey ilaa 1,150 askari, halka todobaadyada soo soocda ilaa 250 askari ay dhameysan doonaan tababar haatan u socda.
Midowga Yurub ayaa ciidamada Soomaaliya ku tababari jiray dalka Uganda, hase ahaatee waxaa xeradaas loo soo raray Muqdisho.
Daawo: Xasuuq shalay ka dhacay Masjid ku yaalla dalka Nigeria
Baarlamaanka Puntland oo dood kulul ka yeeshay dhulka Somaliland ka heysato